MMCP Photo Contest - May 2014 - Workplace Photography ( Voting )
View Poll Results: What are your favourite photos of May Photo Contest (Workplace Photography)?
Thread: MMCP Photo Contest - May 2014 - Workplace Photography ( Voting )
05-21-2014 07:08 AM #1
MMCP Photo Contest - May 2014 - Workplace Photography
( NydKifyGJ0if "mwfyHkrsm; ESifh rJay;a&G;cs,fjcif; )
1/ jrefrmhrQm;ewfarmif toif;0ifrsm;rS rJay;a&G;cs,foGm;rnf/ toif;0if wpfa,mufvQif oHk;rJ ay;cGifh &Sdygonf /
2/ rJay;&ef arv 21 &ufaeYrS 29 &ufaeY txd / jrefrm pHawmfcsdef 29 &ufaeY n 11 em&D 59rdepf aemufqHk; /
tm;vHk;yJ cPae&if rJay;vdkY&ygNyD / ukd,ftBudKufqHk; oHk;yHkudk Ak'fvkyfjyD; rJay; ay;yg /
yg0if,SOfNydKifol aygif;7a,muf&SdNyD; "mwfyHk aygif; 15 yHk &Sdygw,f/
jrefrmhrQm;ewfarmif taysmfwrf; "mwfyHkNydKifyGJ
JanJan, khanhlaing, nnnaing, richtt, zero6
05-21-2014 07:36 AM #2
1 - Image1
2 - Image2
3 - Image3
4 - Image4
5 - Image5
6 - Image6
7 - Image7
8 - Image8
9 - Image9
11 - Image11
12 - Image12
13 - Image13
14 - Image14
15 - Image15
tm;vHk;yJ rJav;awG ay;oGm;MuygtHk;cifAsm /
aemufyGJawGrSmvnf; 0ifa&mufqifETJMuzdkY zdwfac:ygw,f /
( yHkawG rjrif&&amp;ifvnf; uRefawmfwdkYudk today;ygtHk; cifAsm )
dec1820, flintz, HlaingKaLayThin, JanJan, john009, khanhlaing, kohtwe, KoSetPe, nnnaing, richtt, shankalay2007, Yamarmoto, zero6
05-22-2014 03:48 AM #3
tckqdk&if rJay;xm;olaygif;6a,muf &SdoGm;ygNyD/
tckqdk&ifawmh "mwfyHk2yHkujzifh4rJ pD eJY OD;aqmif aeNyD; aemufwpfyHkuawmh3rJeJY uyfvdkufaeygw,f /
"mwfyHkav;rsm;udk rJav;rsm; ay;oGm;MuygtHk; / NyD;awmh uGefrefYav;rsm;av; ay;oGm;MuygtHk;cifAsm /
dec1820, JanJan, khanhlaing, richtt, Thura Soe, Yamarmoto, zero6
05-22-2014 05:46 AM #4
ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဖြစ်လို့ ကွန်ဂရက်ကျူးလေးရှင်းပါ ဓါတ်ဆရာများ
စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေလည်း အားလုံးကောင်းကြတာမို့လို့ ဒီတစ်ခေါက်ပြိုင်ပွဲဟာ အရင်ပြိုင်ပွဲတွေထက်ကို ပြည့်စုံနေသလို ခံစားရပါတယ် ။
(၁) ပုံဟာ အလုပ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ ပုံမှန်ကနေ ခွဲထွက်ပြီး ထူးထူးခြားခြားတွေးခေါ်ထားတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံပါ ။
(၂) ပုံရဲ့ အဓိကပြဆိုချက်က နေရောင်နဲ့ မီးခိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ။ တစ်ချိန်က ဆောင်းမနက်ခင်းအချို့ကိုပြန်ပြောင်းသတိရစေတယ် ။
(၃) ပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပျော်စရာကြီးလို့ခံစားလိုက်ရပါတယ် ။
(၄) ပုံကတော့ တော်တော်ပညာသားပါတဲ့ပုံပါပဲ ။ complementary color အနီနဲ့ အစိမ်းကြောင့် ဘ၀င်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ ခံစားမှုရသကိုရရှိခဲ့ရလို့ ကျေးဇူးပါဗျို့ ။
(၅) ဟာ ရင်ဘတ်ထဲကိုပြင်းထန်စွာ ထိရှစေခဲ့တယ် ။ ကျရာဇာတ်ရုပ်မှာ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ ။
(၆) ဟာလည်း ဘ၀င်ကိုကိုင်လှုပ်စေနိုင်တဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံပါပဲ ။ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်လုံးတွေပေါ့ ။
(၇) က အဖြူအမည်းဖြစ်နေတာ အချိန်တစ်ခုကို ပြချင်တာလား၊ အလင်းနဲ့အမှောင်ကိုပြချင်တာလား သေချာတော့မကွဲပြားဘူး ။ ဓါတ်ပုံကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ အချိုးတကျဖြစ်နေတယ် ။
(၈) ကိုတော့ ပြောစရာတွေများနေလို့ ချန်လှပ်ထားလိုက်ပါတော့မယ် (ရလဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာပြောနေကျ ဟိုလူကြီးလေသံကျလို့ )
(၉) လွမ်းစရာ ။
(၁၀) ဒီပုံမှာ ခံစားလိုက်ရတာက ခြားနားတဲ့ဘ၀နှစ်ခု၊ မတူညီတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံနှစ်မျိုး။
(၁၁) ပုံကိုကြည့်ရတာ တော်တော်ကြီး စိတ်ဆင်းရဲလိုက်ရတယ် ။ နောက်ကွယ်က ဘ၀အဓိပ္ပါယ်တွေအများကြီးကို ဆက်စဉ်းစားမိစေတယ် ။
(၁၂) စိတ်ဝင်စားစရာ အနုပညာတစ်ခုကို မြင်တွေ့ရလို့ သဘောကျမိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပုံမှာ တစ်ခုခုလိုနေသလိုပဲ ။
(၁၃) အထူးပြုပြဆိုမှုမှာ အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသွားလို့ အမြင်အာရုံကိုဖမ်းစားစေတဲ့အရာတွေက နောက်က ပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားတယ် (ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးး)
(၁၄) ဒီပုံလေးဟာ ဘ၀င်ကိုအေးချမ်းသွားစေတယ် ။ ဘာရယ်ကြောင့်လို့ မဖော်ပြတတ်ဘဲ အနှစ်သက်ဆုံးပုံဖြစ်နေတယ် ။
(၁၅) ကတော့ အလှအပထက် လက်တွေ့ဘ၀ကို အသားပေးဖော်ပြထားတဲ့ပုံမို့ အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးရှိသွားတဲ့ပုံတစ်ပုံပါ ။
ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရတာဟာ စာမျက်နှာတစ်ခုထဲမှာ ဘ၀အဓိပ္ပါယ်အားလုံးကိုတခါတည်းဖတ်ရသလိုပါပဲ ။ မသိမီတဲ့ ဘ၀ပေါင်းများစွာကို မြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
Last edited by HlaingKaLayThin; 05-23-2014 at 01:23 AM.
Collector, dec1820, flintz, JanJan, khanhlaing, KoSetPe, richtt, ThunderHawk, Yamarmoto, zero6
05-22-2014 12:58 PM #5
ပြိုင်ပွဲဝင်ခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်။ လှလဲလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျားနဲ့ ပန်းနဲ့ အရောင်တူနေတော့ ချက်ချင်းကြည့်လိုက်ရင် ပျားပျောက်ပြီး ပန်းတွေပုံပဲတွေ့လိုက်ရတယ်။
Silhouette ပုံလေးကို ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ပြထားတာ composition ရော color ကော အရမ်းသဘောကျမိပါတယ်။ ဘာမှ ပြောစရာကိုမရှိအောင် လှပါတယ်။
ရိုက်ထားတာလေး သဘာဝကျပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် background ကရှုပ်တော့ subject ကသိပ်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ apature ချဲ့လိုက်ရင်လဲ ပိုကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ရိုက်တဲ့နေရာကနေ ဘယ်ဘက်နည်းနည်းထွ က်ရိုက်ပြီး နောက်ကလူလဲအရှင်း လောက်ဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ composition 1/3 rule လေးသုံးသင့်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကိုရင်ပုံလေးချစ်စရာပါ။ နောက်ကကိုရင်လေးတစ်ပါးကို crop လုပ်ပြီး photoshop နဲ့ ပုံအရှေ့က ဖြူနေတာလေးကို highlight လေးလျှော့လိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ပုံမှာ ဘေးကအိုးလေးတွေက အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူနှဲ့ရှုပ်နေတယ်ဗျာ။ အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင် ကိုယ်လေးနဲနဲငုံ့ပြီး မျက်နှာလေးကို focus ထောက်လိုက်ရင် ရှေ့ကကွယ်နေတဲ့ ကရားတွေ ၀ါးသွားပြီ။ ပုံကောင်းတစ်ပုံဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရိုက်တဲ့လူနဲ့ လုပ်တဲ့လူနဲ့ မျက်လုံးတစ်တန်းတည်းဖြစ်ဖို့ပြောတာပါ။ တော်တော်လေး ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။
နောက်ထပ် Silhouette လေးပါ။ composition လေးလှပါတယ်။ တော်တော်လေးလဲကြိုက်ပါတယ်။ ကာလာကတော့ ဘာလို့ အဲဒီအရောင်လေးလုပ်လိုက်လဲ ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လဲ မမှန်းတတ်ပါဘူး။ အဖြူအမဲလေး ဒါမှမဟုတ် သူ့ကာလာလေးအတိုင်းဆိုရင် ပိုလှမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အခုခေတ်စားနေတဲ့ retro touch လေးဆိုရင်လဲတော်တော်ကောင်းသွားမှာပါ။ အကြိုက်ဆုံးထဲက တစ်ပုံပါ။
crop လုပ်တာနည်းနည်းများသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာလုပ်နေမှန်းမသိတော့ သိချင်မိပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်။ subject နဲ့ background တော့မကွဲပါ။
နေ့တဓူဝလုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့ တကယ့်လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်းပေါ်လွင်ပါတယ်။ ကြိုက်ပါတယ်။
တစ်ချို့ပုံတွေတော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်။ မဲတော့ပေးပြီးပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ်မဲတွေဖျောက်ထားတယ်နော်။ တစ်ခုသတိထားမိတာ ဒီမှတင်ဟုတ်ပါဘူး ရှေ့ပွဲတွေတည်းကပါ တစ်ချို့ပုံတွေက ခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်ဖက်ပေမယ့် DSLR နဲ့ point and shoot ကွာတာတစ်ကြောင်း၊ edited နဲ့ ဒီအတိုင်း memory card အထဲကအတိုင်းတင်လိုက်တာကတစ်ကြောင်းကြောင့် ပုံလေးတွေ မဲရနိုင်ပေမယ့် မရနိုင်တာတွေ တွေ့နေရတယ်ဗျာ။ အိုင်ဒီယာလေးတွေကောင်းတဲ့ ပုံတွေအများကြီးဗျာ။ တကယ်လို့ dslr မကိုင်ရင်တောင် photography ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဖြင့် editing လေးပါးပါးလေးတော့ လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ e.g shooting with instagram or editing with phone photoshop. အလွယ်လေးတွေပါ။
Last edited by Collector; 05-22-2014 at 02:38 PM.
dec1820, flintz, HlaingKaLayThin, JanJan, khanhlaing, KoSetPe, richtt, sunny007, ThunderHawk, Yamarmoto, zero6
05-23-2014 11:00 PM #6
acgif;pOf MuyfvdkU NydKifolenf;w,f xifxm;ayr,fh wu,fwrf;usawmh NydKifyGJ0ifyHk 15 yHkawmif &w,fqkdawmh tm;&p&myg../
"mwfyHk&SifawGudk tBuHav; enf;enf; ay;vdkwmu Crop vkyfwwfzdkUyg../ Rule of Third qdkwm&dSygw,f../ [dkt&if udka&T&dk;BuD; wifay;xm;wJh ydkUpfwpfckrSm Rule of Third eJU ywfowfvdkU tckvdk azmfjyxm;zl;ygw,f../
NyD;awmh Rule of Third qdkwm &dSygw,f/ yHkwpfyHkudk uefUvefU a&m a'gifvdkufa&m oHk;ydkif;pD nDnDrQrQ ydkif;Munfhvdkufyg/ a'gifvdkufrsOf; ESpfaMumif;? uefUvefU rsOf;ESpfaMumif; &r,f/ object u a'gifvkdufqdk&if a'gifvkdufrsOf; ESpfaMumif;teuf wpfaMumif;aMumif;ay:rSm &dSae&if taumif;qHk;yJ/ tv,facgifwnfhwnfhrSm &dSraeoifhygbl;/ We should give room for the object to breath. /
yHkwdkif;udk Rule of Third vkdufem&r,fvdkU rqdkvdkygbl;/ 'gayr,fh uRefawmfwdkUvdk Beginner b0rSmawmh Textbook xJutwdkif; vkyfvdkufwm trSm;r&dSbl;aygh../ vG,fvG,fav;eJU udk,fhyHkudk vlydk pdwf0ifpm;atmif vkyfEdkifwJh enf;wpfenf;yg../
The rule of thirds isa"rule of thumb" or guideline which applies to the process of composing visual images such as designs, films, paintings, and photographs. The guideline proposes that an image should be imagined as divided into nine equal parts by two equally spaced horizontal lines and two equally spaced vertical lines, and that important compositional elements should be placed along these lines or their intersections. Proponents of the technique claim that aligningasubject with these points creates more tension, energy and interest in the composition than simply centering the subject would.
Last edited by flintz; 05-23-2014 at 11:06 PM.
Collector, dec1820, HlaingKaLayThin, JanJan, ThunderHawk, Thura Soe, Yamarmoto
05-28-2014 02:54 AM #7
rJay;zdkY aemufqHk;&ufudk a&muf&SdvdkYvmygNyDcifAsm /tckqdk&if jzifh rJay;xm;ol ta,muf 20 &SdoGm;ygNyD /
yxroHk;ae&mu "mwfyHkrsm;&JU rJta&twGufuawmh odyfruGmygbl;cifAsm / 1 rJpDavmufyJ uGmygw,f /
tqifajy&if rJav;rsm; ay;oGm;MuygtHk;/
flintz, JanJan, KoSetPe, MrYoDa, Yamarmoto
05-30-2014 04:13 AM #8
tckqdk&if rJ&Hkvnf; ydwfNyDqdkawmh tckyGJrSm tEdkif&&amp;SdoGm;wJh NydKifyGJ0if "mwfyHkav;udk aMujimay;yghr,f /
rJ 16 rJ eJY tEdkif&&amp;SdoGm;wJh "mwfyHkuawmh image9 yJ jzpfygw,f / 'D"mwfyHkudk &dkuful;xm;wJh NydKifyGJ0ifuawmh kosetpe yJ jzpfygw,f /
uGef*&ufusLav;&Sif;yg Asm /
rJaygif; 12 rJeJY 'kwd, &&amp;SdoGm;wJh yHkuawmh image2 yg / &dkuful;oluawmh dec1820 jzpfygw,f /
rJ 11 rJ eJY wwd,ae&mudk awmh image5 rS &&amp;SdoGm;ygw,f / &dkuful;xm;oluawmh refbm Collector jzpfygw,f /
aemufwpfvrSmvnf; 0ifa&muf ,SOfNydKifay;MuygtHk;vdkY qE´jyK&if; 'Dwpfv NydKifyGJav; 'DrSmyJ &yfem;cGifhjyKyg /
jrefrmhrQm;ewfarmif taysmfwrf;"mwfyHkNydKifyGJ jzpfajrmufa&; tzGJY
Collector, dec1820, flintz, HlaingKaLayThin, JanJan, KoSetPe, nnnaing, richtt, Salone, softsin, Yamarmoto
05-30-2014 05:26 AM #9
NydKifyGJ0ifrsm; tm;vHk;udk txl;yJ aus;Zl;wifygw,f cifAsm../ NydKifyGJ0if rifbmrsm;&Jh trnfudk azmfjyay;xm;ygw,f../
aemufvrSmvJ tm;BudK;rmefwuf yg0if ,SOfNydKifMuapvdkygw,f cifAsm/
Last edited by flintz; 05-30-2014 at 05:29 AM.
Collector, HlaingKaLayThin, KoSetPe, nnnaing, richtt, ThunderHawk, Yamarmoto